NDỊ “ALMAJIRI AGADI” KA Ọ BỤ NDỊ AGHA ỌLỤỌ ỌLAA? – hoo!haa!!
NDỊ “ALMAJIRI AGADI” KA Ọ BỤ NDỊ AGHA ỌLỤỌ ỌLAA?
Akụkọ na-ewuzi kemgbe izu ụka olemole bụ maka ndị okenye mmadụ, gachara afọ ọnụ, a sị bụ ndị Almajiri, ndị si Ugwu Awụsa awụbata Ala-Igbo nakwa akụkụ Ọwụwa Anyanwụ Naịjiriya ndị ọzọ n’ike n’ike.
Nke mbụ bụ na o doro anya na ndị a abụghị Almajiri. Almajiri bụ ụmụaka bu efere akpagharị na- arịọ ihe.
Ọzọkwa, kedụ ihe mere o ji bụrụ oge ugbua Gọọmenti Etiti tiri iwu machibidoro njem ísì n’otu Steeti fere na nke ọzọ ka ndị a ji awụbata n’Ala-Igbo nakwa akụkụ Ọwụwa Anyanwụ Naịjiriya ndị ọzọ ka igurube.
A chụghachi ha azụ taa, echi ha etinyekwa ísí. Nkea agbachị aka chaa chaa maka na “Ebe nwata na-ebe ákwá na-atụ aka, nne ya anọghị ya, nna ya anọrọ ya”. Kedụzi mgbe ụtọ na mmekọrịta nke ahụ malitere n’etiti ha na Ndigbo? Ọ kwa ụtọ azụ na óké?
Kedụzi ihe ndị “Almajiri agadi” a chọzị abịa be anyị nke dị ha oke mkpa? Yerima Shettima, onye bụ Onyeisi, otu Arewa Youth Council ma bụrụkwa “Almajiri Agadi” jiri aka ya kọwaa na o nwere ihe ọzọ ndị a bụ n’obi.
Nwamadi ahụ sapere ọnụ o ji eri ji eri ede were kwuo na “Ndigbo ịkwụsị ndị Almajiri ndị Ugwu Awụsa bụ ịchọ ha okwu maka na ndị be anyị bi be ha”.
Ọ bụrụ na ije ndị “Almajiri Agadi” a kwụ ọtọ, gịnị mere ha ji ezo ezo were abata ka ndị ohi? Onye chọọ ịbata be gi hapụ ọnụ ụzọ ga si azụ ụlọ wụfee mgbidi were bata, ị ga-asị ya nnọọ ka ị ga-eme ya ihe a na-eme onye ohi?
Na ndi Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ mechara kwupụta hoo!haa!! “na njem ndị Almajiri Agadi a na-abịa n’Ala-Igbo edoghi ha anya” gosiri na “agwọ nọ n’akịrịka”. Kedu ihe mere na ndị Gọvanọ anyị enweghị ike ijide ndị a maka ịda iwu Gọọmenti Etiti banyere njem n’etiti Steeti na Steeti?
Keduzi ihe ji nkịta ọnwụ? Gịnị mere na ndị Gọvanọ a enwebeghi ike iguzobe ótù nchekwa Ndigbo etu ndị Yoroba siri guzobe Amotekun? Gọvanọ Devid Ụmahi nke Ebọnyị Steeti, onye bụkwa Onyeisi oche Ọgbakọ ndị Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ kwuburu na ha ga malite ya n’ọnwa Eprel. Ugbu a, Eprel agafeela, Mee nọchie, ihe ha na-akọzị bụ “gbagoro gbadaa”.
N’ezie, “Awụsa abatago Ọka” ka ndị be anyị nọ ezumike Mkpọchi Obodo Ọrịa Koro.
Ụta adịghịrị ndị sịrị na ndị Ugwu Awụsa ji ike amịbata na be anyị bụ ndị agha ọlụọ ọlaa ndị Fulani. Nke mbụ, ndị be ha hụchara ihe na-eme ma gbachie nkịtị, mmadụ dịka Yerima Shettima dịka “Almajiri Okenye” íbe ha, kwadoro ha.
Dangote n’onwe ya na-enyekwa ha nkwado zuru oke site na iwepụta ụgbọala gwongworo ya maka njem ọjọọ a.
Onye ọbụla hụworo ebe ndị a mere ihe ma na obi pụrụ ha azụ. Ha abụghị ndị mmadụ kwesịrị ịgba nkịtị ka ha were mmà gaa mmadụ n’azụ.
Igbo ndị ọma, mmadụ e kwesịrị ịnọ be ya nọpịa mkpụrụ amụ? Chetakwanụ na “agbaghị ụzọ azụ owere mgba na ọ dịghị echi”
Hmm, o ruwekwala ka o si eru. Ka anyị mụrụ anya dịka azụ.
Previous Post: EZIGBO NRI ZURU ÒKÈ KWESỊRỊ ỊNA-ADỊGIDE N’ALA-IGBO GBURUGBURU
Next Post: EJIMA KORO : NWANYỊ ỌRỊA KORO AMỤỌLA EJIMA NA LEGỌS